डरले गर्दा सबै नेपालीहरु रातीसम्म भए पनि लाईनमा बसिराखेका छन्. – Karnalikhabar
डरले गर्दा सबै नेपालीहरु रातीसम्म भए पनि लाईनमा बसिराखेका छन्.
काठमाडौंमा पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीमा तेल भर्नेहरुको चाप बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चर्किने र मूल्य बढ्ने अवस्था देखिएपछि शुक्रबार अबेर रातिसम्म पनि पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीहरुको लामा लाइनहरु लागेको छ ।
काठमाडौंमा धेरैजसो पेट्रोलपम्पमा तेल भर्न बसेका धेरैजसोमा आशंका पेट्रोलियम ढुवानी रोकिएकाले शनिबारबाट तेल नपाइने होकि भन्ने आंशका थियो । नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी देशभर ठप्प बनाएका छन् ।
आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपालभित्रका निगमको डिपोबाट पम्पहरुले किन्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको छ । यसका कारण शुक्रबार पम्पहरुले निगमको डिपोबाट तेल ल्याउन पाएनन् ।
शुक्रबार भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा लिटरमा २७ रुपैयाँ घाटा कायम रहेको भन्दै निगमले विज्ञप्ति निकालेका कारण पनि आज–भोलि नै मूल्य बढ्ने आशंकाले तेल हाल्न लाइनमा बस्नेहरु छन् ।
अघिल्लो - देउवाको भारत भ्रमणबाट जनताको अपेक्षा के ?
देउवा र मोदीले आज संयुक्तरुपमा रेलवे सेवाको उद्घाटन गर्ने - पछिल्लो